B :: :: Shell nwụnye na nhazi | Site na Linux
B :: :: Ntinye Shell na Nhazi
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, Aplicaciones, Na-atụ aro, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Agwala m agwa gi maka B :: :: Shell, na n'isiokwu a, m ga-akọwa nzọụkwụ site na otu anyị nwere ike isi wụnye ọmarịcha a Shell gbasara nke anyi KDE ma mesịa hazie ya obere dị ka ụtọ anyị si dị.
Ntinye ga-eme na Nyocha Debian Ọ bụ nkesa m nwere na aka, agbanyeghị, ọ dị m ka usoro ntinye kwesịrị ịrụ ọrụ na distro ọ bụla ọzọ ma ọ ga-abụ na Arch, ihe niile bụ ihe ntinye B :: :: Shell site na nchekwa AUR.
Ọ dị mkpa iru ngwụcha nkuzi iji nwee ike ịnụ ụtọ ya B :: :: Shell enweghị nsogbu ọ bụla
1 Ihe achọrọ.
2 Inweta BE :: Shell
3 B :: :: Shell nwụnye
4 Dochie Desktọpụ Plasma
5 Emechara? Ee e, anyị kwesịrị ịhazi.
6 Anyị emechaala, mana enwere ihe ị ga-ebu n’uche
7 Kedu ihe m na-efu?
Iji nwee ike iji B :: :: Shell anyị ga-wụnye:
KDE dị ka bụ mgbagha.
Dị mkpa ngwá ọrụ (wụnye ngwugwu dị oke mkpa).
Ngwaọrụ ijikwa GIT (wụnye git-core ngwugwu).
Echere m na nke a ezuola.
Inweta BE :: Shell
Na-eche na anyị emezuola ihe niile dị mkpa, anyị nwere ike ịnweta B :: :: Shell Maka nke a, ihe anyị na-eme bụ imeghe ọdụ ma tinye:
Anyị ga-ahụ ihe dị ka nke a ma ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ:
Ugbu a, ihe anyị ga - eme bụ ịgbaso ntuziaka ndị anyị nwere ike ịhụ na Wiki Wiki.
B :: :: Shell nwụnye
Anyị na-enweta nchekwa ahụ emere mgbe emechara iwu ahụ:
Ma otu oge n'ime ya anyị ga-abanye na nchekwa nchekwa:
Ma obu gini bu otu:
Ugbu a, anyị na-agbaso iwu ndị a iji chịkọta BE :: Shell:
Anyị ga-elebara anya na mmepụta nke ederede, ka ọ ghara inye anyị njehie. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, anyị ga-etinye ihe ndị na-esonụ n'otu ọdụ.
Biko, tupu imezu iwu ndi a, guo ngalaba mmebere nke B :: :: Shell
Anyị dị njikere iji BE :: Shell mana nke mbụ anyị ga-emerịrị ihe ọzọ. Dị ka onye edemede si kwuo, anyị ga-emerịrị iwu ahụ:
Ma gbanyụọ "Onye njikwa ọkwa ọkwa" inwe ike iji akara ngosi nke KDE na usoro tree (tree).
Dochie Desktọpụ Plasma
N'ime nchekwa -agba-koodu, anyị nwere ike ịchọta faịlụ:
Dị ka onye edemede, anyị ga-idetuo faịlụ ndị a ka ~ / .kde / òkè / autostart / otu osila di, mu na ya (Asụsụ Debian), uzo bu ~ / .kde / Nchekwa onwe /
Anyị ga-emepụta folda ahụ ~ / .kde / òkè / autostart / Ọ bụrụ na anyị enweghị ya ma detuo faịlụ ndị dị na ya, ma ọ bụghị na ọ gaghị arụ ọrụ B :: :: Shell na mmalite.
N'ihe banyere plasma-desktọọpụ .desktop y - krunner.desktop, ihe ha na-eme bụ gbanyụọ ngwa abụọ ahụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ krunner dịka ọmụmaatụ, anyị anaghị e copyomi ya.
Emechara? Ee e, anyị kwesịrị ịhazi.
Ọ bụrụ na anyị na-agba ọsọ B :: :: Shell Mgbe ị wụnye / chịkọtara ya, anyị ga-enwe ihe dị ka nke a:
Ma dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị mma. Ma anyị nwere ike idozi nke ahụ. N'ime folda ahụ -agba-koodu, enwere folda ọzọ a na-akpọ ihe atụ. N'ime faịlụ a na-akpọ Ogbogu Okonji na kwa oku ozo .bụ. Shell.beos, ma anyị ga-arụ ọrụ na nke mbụ.
Ọfọn, ndị a bụ ihe atụ abụọ nke faịlụ nhazi nke B :: :: Shell. Anyị na-emeghe ọnụ na-etinye:
Ugbu a, ka anyị gaa desktọọpụ »Right Pịa» Config »Akwajuru na anyị kwesịrị inwe ụdị ihe a:
Na nke a, etinyelarị m ihe oyiyi ndabere na ya. Maka nke a anyị na-aga desktọọpụ »Right Pịa» Akwụkwọ ahụaja »Họrọ.
Mana dịka ị nwere ike ịhụ na ọkwa m gara aga, enwere isiokwu ndị ọzọ mara mma ị ga-etinye B :: :: Shell, dị ka nke a:
Isiokwu a na ntuziaka ya nwere ike nweta na njikọ a.
Anyị emechaala, mana enwere ihe ị ga-ebu n’uche
Banyere Wiki B :: :: Shell ị kwesịrị ịma ihe ole na ole:
- Isetịpụ: Faịlụ nhazi ebe ọnọdụ nke ogwe ahụ, akwụkwọ ahụaja, wdg ... guzobere, dị ~/.kde/share/config/be.shell ya mere, mgbe anyị gbanwere isiokwu, faịlụ a nwere ike dochie ya.
- Ọdịdị: Isiokwu nke B :: :: Shell nọ n'ime ~/.kde/share/apps/be.shell/Themes/.
- Nchịkọta nhọrọ: Ọ bụrụ na i lee onyinyo dị n'elu, ogwe elu nwere ụdị GlobalMenu. O kwere omume na na isiokwu nke B :: :: Shell Ihe dị n’ime Deviantart faịlụ a na-akpọ IsiMenu.xml, nke anyị ga-etinye ~/.kde/share/apps/be.shell/ ma ọ bụ otu a na-akpọ submenu.xml nke a na-etinye n'otu folda ahụ.
Kedu ihe m na-efu?
Ọ dị naanị otu ihe anaghị amasị m B :: :: Shell na ọ bụ eziokwu na enweghị m na tray esi ejikwa njikọ netwọk. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike idozi nke a, biko mee ka m mara site na ikwu, otu maka ndị nwere nsogbu ịwụnye.
Nke a bụ ihe m mụtara banyere B :: :: Shell, M na-atụ na ọ dịghị ihe na-ekpe na inkwell ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » B :: :: Ntinye Shell na Nhazi
Na njiko na chakra repositories ngwugwu bụ nke a beshell-git.
Na aur na ccr
Mana AUR n'egosi ngwugwu dika ihe ochie.
Edere ya akara dị ka ihe mgbe ochie
Ihe ngwugwu ahụ sitere na 11/08/2012 (20120811)
Ezi amị elav, ụnyaahụ m na-agụ banyere beshell ebe a, m malitere na-achọ otú wụnye ya na ahụghị ihe ọ bụla
Ahụrụ m na BE :: Shell enweela ihe ịga nke ọma n'akụkụ ndị a, eziokwu ahụ bụ na ọ bụrụ na ọ dị mfe ịwụnye ma hazie, ọ ga-abụrịrị onye ama ama n'etiti ndị ọrụ Linux. Echere m na ọ bụ ihe oge, maka ugbu a, ọ bụ ebe dị mma iji tinker ma hapụ ya ka onye ọrụ chọrọ, ruo obere nkọwa.
Echere m ... KDE ịbụ onye enwere ike ịhazi ya na ịnwe ike ịnabata nhazi ị chọrọ ... kedu maka shei?
Amaghị m, gbanwee gaa n'ụdị Mac karịa ma ọ bụ na echere m na ọ dị ọkụ… dabere na…
Dika m guru kde adighi akwado css. Beshell na-etinye obere ego karịa plasma. Ọ ga-abụ ihe ọkụkụ, nke pere mpe na nke nwere ike nwee ike ịhazi ọzọ na plasma.
Nke a abụghị ihe Razor-Qt bụ maka!
Mana iji tụnyere Razor-Qt na KDE dị ka iji tụnyere Renault Clio na Mercedes… xD
Ya mere Plasma bụ shei KDE ma dịka Gnome 3 enwere ike gbanwee ya, nke ahụ dị m mma, chee na ọ ga-ekwe omume, mbara igwe bụ njedebe.
E wezụga oke onyinye @elav nyere anyị, anaghị m aghọta mkpa ọ dị maka iji ya.
Ọ bụrụ na m chọrọ iji "shei" m ga-aga Gnome, were Shell 3 ha ma ọ bụ cinnamon.
KDE, ọ dị m ka ọ zuru oke dịka ọ dị. O yiri m ka enwere ike ịhazi m nke ukwuu, ahụkwala m ihe dị egwu na ya. Ahụghị m mkpa ọ dị iji nke a, na ijikọ ihe niile siri ike ịwụnye ma hazie.
Na akụrụngwa nwere oke ọ nwere ike ịbụ ihe ezi uche (ma ọ bụrụ na ọ dị mfe karịa Plasma).
Adị m mma na desktọọpụ ọzọ nwere isiokwu ndị dabeere na QSS. Ndị na-efe CSS nwere ike iji desktọọpụ KDE ugbu a.
E nwere oge mgbe ịchọ ịmata ihe nwere ike ịkarị mkpa.
ma nwee plasma ...
Achọpụtara m na ọrụ a na-adọrọ mmasị 😀
Joser. Nnọọ. Ma, ihe dị mgbagwoju anya ịwụnye, ọ ka enweghị ike ịhazi ya ma ọ dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ green. Ma oburu na i mee m oso, odi ka ihe joro njo ma adighi amiputa ihe… okwesiri itule ya na otito. Kama Gnome 3 na-ewere mkpara niile. Ma ọ bụ olee otu nke a si aga?
Ọfọn, kpọrọ. Ọ dị ka okpokoro na-adịghị ahụkebe. Nọmalị ndị «ozi ọma» n'echiche a na-iji tactile were…. mana nke a dị ka desktọọpụ ọhụụ…. ọkara ka ọtụtụ. Anyị ga-ahụ otu o si gwụ.
I kwesiri inyocha echiche gị banyere ihe Shell pụtara:
Enweghị ike ịmepụta oge abụọ? Otu maka kde4 na otu maka BE :: Shell. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ naanị n'asụsụ Bekee?
Daalụ maka isiokwu ^^
…. Ee na ihe…. Ekwuru m na ọchịchọ ahụ bụ ịbụ ụdị ihe ...
M na-ekwu na atypical ihe abụghị iji chee desktọọpụ na-eso desktọọpụ atụ. Ndi ozo bu ihe oru ndi ozo na eme. Echere m na ị jikọtara Shell na gburugburu ebe obibi na-emetụ aka (achọpụtara m na m hiere ụzọ).
Eziokwu bụ na m ka wụnye ya git na arch ma ọ bụrụ na m ga-etinye ya n'isi ma enwere m mmasị na ya
Zaghachi Mehizuke Nueno
Ha na-ekwu na nke ugboro atọ bụ amara, nke ọma, nke a bụ oge nke atọ m gbalịrị ịchịkọta koodu ahụ ma ugbu a enyeghị m njehie ọ bụla.
OpenSUSE 12.2 dị!
Nnukwu U310 UXNUMX: A na-etinye keyboard na Ubuntu